Raha toy ireny vetivety ireny ny kabarin’ny filoham-pirenena hita farany dia efa azo sary an-tsaina sahady koa ny mety ho kabariny afaka tapa-bolana momba ity ady amin’ny COVID 19 eto Madagasikara ity hatrany. Toy ny efa mazava izany fa isan’ny tanjona aloha izany ny hampisotroana mangidy na tambavy CVO malagasy maro. Toy ny efa ezahana sisihana an-tsaina koa fa tsy maintsy hanetriketrika ny fankalazana ny faha 60 taonan’ny 26 jona ary handravaka izany raha ny sary hita ny fidradradradrana fa voafehy ny COVID 19 nohon’ny ezaka nataon’ny filoham-pirenena. Nanana finoana isika ka nivoaka mpandresy. Mety hisy toerana voatokana ho an’ireo nisotro Covid organics ka sitrana mihitsy aza angamba dia ho asaina mioraka kely ahitana fa ireny izy ireny. Takona hatreto ny momba sehatra tsy miankina sy ny sosialim-bahoaka tena izy. Sa ve mbola ho tezaina ela amin’ny tolotolotra toy ny vary mora sy ny vatsy tsinjo hatrany ?